Sawirro-Sidee maanta looga ciidey magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. – Radio Daljir
Sawirro-Sidee maanta looga ciidey magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Luulyo 6, 2016 6:05 b 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 06-July-2016 munaasabadda ciidul-fitriga kala qayb galay kumannaan qof oo muslminiin ah oo salaaddii ciidda ku tukukanayey garoonka kubadda cagta ee Cawaale Stadium ee magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha ayaa farxadda cidda ugu hambayeeyey malaayiinta qof ee soomaaliyeed ee ku kala tukanayey salaadda ciidu-fitriga daafaha dunida gaar ahaa shacab weynaha reer Puntland, waxaana uu Eebbe uga baryey dhammaantoodba in ay ku ciidaan ciid wanaagsan.
“Ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, waxaan rabaa anigoo ka faa’iidaysanaya fadliga maalintan barakaysan ee ciidda in aan tahniyadda ciidda u diro shacabka reer Puntland iyo kan Soomaaliyeedba oo iraahdo ciid wanaagsan.
Ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu ciiddan ciiddeeda kale inaku gaarsiiyo nabad-gelyo, wadajir iyo midnimo”ayuu yiri Madaxweyne Dr. Cabdiweli Maxamed Cali.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shacabka Puntland meel walba oo uu joogo ugu baaqay in ay adkaystaan amnigooda iyagoo la shaqaynaya laamaha kala duwan ee ammaanka.
Sidoo kale Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya sida ugu wanaagsan ee looga hor tegi karo kooxaha sharwadayaasha ah ayuu shacab Puntland ku boorriyey in aanay guryohooda ka kirayn cid aanay garanayn oo aanay ka haysan dammaanad buuxda oo lagu kalsoonaan karo.
“Cadowgu markii aynaan mideysneyn waa geesi wuuna ka faa’iideystaa, markii aynu uga soo wada jeesano oo mid nahayna waa fuley”ayuu yiri Madaxweyne Dr.Cabdiweli Maxamed Cali.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hambalyo u diray ciidamada difaaca Puntland, kuwaas oo habeen iyo dharaarba u heellan difaaca Puntland iyo sidii uu shacabka Puntland ugu noolaadan sharaf iyo karaamo.